अक्षयको कमार्इ सलमानको भन्दा बढि, एक वर्षमा कति आम्दानी ? हेर्नुस् - Everest Dainik - News from Nepal
अक्षयको कमार्इ सलमानको भन्दा बढि, एक वर्षमा कति आम्दानी ? हेर्नुस्
काठमाडौं, साउन २ । फोर्स सबैभन्दा बढि कमाइ गर्ने १०० सेलिब्रेटीको नाम सार्वजनिक गरेको छ । नाम मंगलबार सार्वजनिक गरिएको हो । जसमा भारतीय अभिनेता सलमान खान र अक्षय कुमार पनि अटाएका छन् । अक्षय यो सूचिको ७६औं र सलमान ८२औं स्थानमा रहेका छन् ।
यी दुवै बलिउड स्टारले कूल ५३५ करोड कमाएका छन् । यस सूचिमा अमेरिकी बक्सर फ्लर्यड मेवेदर पहिलो स्थानमा छन् । उनले एक वर्षमा १९५२ करोड रुपैयाँ भारु कमाएका छन् । आठौं स्थानमा लियोनल मेसी रहेका छन् । उनले एक वर्षमा १११ मिलिएन डलर (करीव ७६० करोड भारु) कमाएका छन् । यस्तै, १०औं नम्बरमा पोर्चुगलका फुटबलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो रहेका छन् । उनले एक वर्षमा ७४० करोड रुपैयाँ कमाएका छन् ।
याे पनि पढ्नुस सलमानद्वारा प्रियंकासँग खेल्न अस्वीकार, बलिउडमा हंगामा
अक्षयले कमाए सलमानभन्दा २० करोड बढि
फोर्सको सूचिका अनुसार अक्षय कुमारले पछिल्लो एक वर्षमा ४०.५ मिलियन (करीव १७७ करोड भारु) कमाएका छन् । सलमान खानले भने ३७.७ मिलियन (करीव २५८ करोड भारु) मात्रै कमाउन सके ।
टप फाइभमा सबैका अमेरिकीः फोर्सले सार्वजनिक गरेको टप भाइभमा अमेरिकाका सेलिब्रेटी रहेका छन् । पहिलो नम्बरमा बक्सर फ्लर्यड मेवेदर, दोस्रोमा कलाकार जर्जक्लूनी, तेस्रोमा रियलिटी टीभी स्टार तथा व्यवसायी काइली जेनर रहेका छन् । -एजेन्सी
याे पनि पढ्नुस सलमानको पहिलो प्रेम यसरी टुट्यो
ट्याग्स: akshay kumar, Salman khan, अक्षय, सलमान, सलमान खान